Albert Rivera uye WhatsApp. Izvi ndizvo zvatinogona kudzidza | Linux Vakapindwa muropa
Albert Rivera uye WhatsApp. Izvi ndizvo zvatinogona kudzidza
Diego ChiGerman Gonzalez | | Updated on 24/09/2019 04:27 | General, Noticias
Zvakaitika kuna Albert Rivera zvinoratidza kuti hatifanire kungovimba nehunyanzvi chete.
Zvakaitika naAlbert Rivera neWhatsApp zvakare zvinoratidza zvinhu zviviri; vezvematongerwo enyika havana chavanoziva nezve tekinoroji, nevatori venhau, kana.
Ndiri kutanga nekujekesa kuti ini ndiri muArgentina uye ndinogara kuArgentina. Ndine zvakakwana nemamiriro ezvematongerwo enyika munyika mangu kuti ndigadzirise vezvematongerwo enyika veSpanish. Chinangwa cheichi positi hachisi chekuregedza kana kudzivirira Mr. Rivera, inodzidzisa kuitira kuti chinhu chimwe chete icho chisazoitika kune vamwe vanhu.
1 WhatsApp encryption uye iyo Indian padlock
2 Albert Rivera uye WhatsApp. Izvi ndizvo zvakaitika
3 Musiyano uripo pakati pekubira nekubiridzira
WhatsApp encryption uye iyo Indian padlock
Peter Drucker Aive mumwe wevanonyanya kukosha masangano ezana ramakore rechiXNUMX. Mumwe wevadzidzisi vangu aigara achizvienzanisa nevamwe nyanzvi pamwe nemutsara uyu:
Peter Drucker akashanda nemakambani akakosha kwazvo pasirese, mamwe ese akaverengwa mumaraibhurari emayunivhesiti akakosha kwazvo pasi rose.
Drucker anoti rimwe rebasa rake rekutanga (muma20s) raive mune kambani yakatumira kuIndia. Chigadzirwa chakabudirira kwazvo yaive yakapfava yakapusa, muenzaniso uri nyore kwazvo kuvhura kunyangwe isina kiyi.
Iyo femu yakasarudza kushambadzira iri nani modhi, iyo yaizoramba chero kusatenderwa kwekuvhura kuyedza. Kwaive kutadza.
Pavakaenda kunoongorora vakaona kuti kukiya, kwevaHindu vasina kudzidza, chaive chiratidzo chemashiripiti. Zvanga zvakaringana kuona iko kukiya pamusuwo kuti pasave neumwe anotsunga kupinda asina mvumo.
Iyo modhi nyowani yaidhura zvakanyanya uye yainetsa kune iyo indasitiri yakatenga imwe modhi. Uye zvakare zvisina basa, nekuti dziviriro yaitsvaga yaive yepfungwa.
Ehe zvakange zvakaringana nemunhu asingatende mashura kuti mukana uyu unyangarike.
Panyaya iyi tanga tichitaura nezvevanhu vasina kudzidza. Asi kana zvasvika kune tekinoroji, kune vanhu vane nhanho yakanaka yekudzidzira izvo zvinoitika kwazviri. Kuvimba kusingaoni uye kusinganzwisisike muhunyanzvi hunoita kuti ukanganwe matanho ekutanga.
Uye tisati tawira kuna VaRivera, ngatirangarirei kuti mukati memharaunda yeLinux iyo mantra inowanzo dzokororwa kuti "Ini ndakachengetedzwa kubva pakurwiswa nemakomputa nekuti ndinoshandisa Linux"
Albert Rivera uye WhatsApp. Izvi ndizvo zvakaitika
WhatsApp vagadziri vanoda kwavo kunyorera inofanira kushandiswa nefoni nhare. Kunyangwe desktop desktop dzinoda nharembozha kuti uzviwane nekuverenga kodhi yeQR.
Zvino, iko kunyorera hakuiti kuti kuve kunoiswa parunhare. Kwemakore ini ndaishandisa WhatsApp pane Android piritsi isina kugona kwefoni. Iwe unongoda nharembozha iyo inogona kugamuchira SMS uye isina waya kubatana.
Maitiro ekuwana account yaRivera aive akadai:
Asingazivikanwe munhu / s akaudzwa kune WhatsApp izvo iyo nhare mbozha yakashandiswa naRivera yakabviswa.
WhatsApp yakatumira Rivera SMS ine kodhi yekuongorora kusimbisa muridzi wayo.
Iye asingazivikanwe munhu / s, achinongedzera saWhatsApp, akamubvunza iye / iye kutiTumira iyo yekuongorora kodhi nesms.
Musiyano uripo pakati pekubira nekubiridzira
Uye pano zvasvika pane chikonzero nei ndataura pakutanga kwekusaziva kwekutapa. Rivera haana kubiwa, aibatwa chibharo.
Mune mazwi mashomanana:
Kugura: Iko kushandiswa kwehunyanzvi hwemakomputa kuwana zvisina mvumo kuwana kune masisitimu kana ruzivo.
Phishing: Kutevedzera chinzvimbo kana munhu kuita kuti munhu anenge akuvadzwa azvipire ruzivo rwepachivande.
Kunyangwe zviitwa zvese zviri nzira dzekuwana ruzivo, zvinosiyana musarudzo yenzira yakashandiswa. Mune phishing mushandisi anonyengedzwa neemail, kufona, kana pamwe meseji newe inomunyengetedza kuti amuwane kuti apindure "nekuzvidira"neruzivo. Kuwana ruzivo hakuna kuomesesa pane kuita email kana webhusaiti kutaridzika zviri pamutemo zvakakwana kutsausa munhu akuvara.
Mukubira, ruzivo rwunobviswa nekusaziva, izvo zvinoita kuti munyori atore kutonga kwecomputer system yake, nechisimba brute kana dzimwe nzira dzakaomarara, kuwana zvakavanzika data.
Chaizvoizvo, matekinoroji maviri aya anowanzo sanganiswa.
Makore apfuura, iyo Joomla yemaneja maneja yaive nebug iyo yaibvumidza kupinda kumaseva kwavakaiswa. Mumwe munhu akashandisa imwe yevatengi vangu kuisirwa kuisa yekunyepedzera Bank YeAmerica peji rebhangi repamba. Akazotumira maemail kune tsamba yekutumira ine chinongedzo cheiyo peji chakavanzika seyakavanzika bhangi email.
Ini ndakazopedzisira ndave kudzima dura nekuti kwemwedzi yakati wandei ekuchengetedza mabhangi maofficial achienderera nekutarisa sevha, vachidya iyo bandwidth.
Ikoko ndakadzidza kwete kungo tarisa zvinongedzo zvinouya kwandiri netsamba, kudzora nguva nenguva mafaera ese andakabata kumaseva angu uye kuona kuti ndiani wevandinopindirana nedzimwe nzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Albert Rivera uye WhatsApp. Izvi ndizvo zvatinogona kudzidza
akhenaton @ pop-os # akadaro
Chinyorwa chakanak… Mamiriro ese aya anondiyeuchidza nezvekuti vatongi nemagweta pavakabvunza Mark Zuckerberg mibvunzo yakapusa kudai. Kazhinji yenguva, vanhu vanotsoropodza uye nekuparadza tekinoroji zvakanyanya ndivo ivo vanozvinzwisisa zvishoma.
Pindura kuna akhenaton @ pop-os #
Hongu, ndinorangarira chikamu icho muCongress. Zvakandipa kutonhora kufunga kuti vanhu ava vane zvombo zvenyukireya.
Sezvo zvakanyorwa kuti "Phishing", kukundikana kunorova kana iwe ukabvunza vatapi venhau kunyatso.
Izvo ndezvekuti ndanga ndanwa zvakawandisa mvura uye kusaziva kwangu kwakanditengesa
BeagleBone AI, nyowani yakapusa bhodhi ine Debian pre-yakaiswa